Ireo safidy tsara indrindra efatra ho an'ny Passbook for Android | Androidsis
Ny safidy tsara indrindra ho an'ny Passbook for Android
Mandritra ny fotoana ela tsy ilaina intsony ny manonta pass pass rehefa mandeha manao dia lavitra isika. Tsy ilaina koa ny manonta tapakila fampisehoana. Ampy izay ny misintona azy ireo amin'ny alàlan'ny findaintsika ary avy eo aseho azy ireo amin'ilay tranonkala voalaza. Fampiharana iray mamela antsika izany dia Passbook, na dia indrisy fa amin'ny iPhone ihany no misy azy. Soa ihany, Android dia manana ny solony hafa.
Izay no hasehonay anao manaraka. Mandao anao izahay miaraka amin'ireo safidy tsara indrindra ho an'ny Passbook izay hitantsika fa misy amin'ny fitaovana Android. Noho izany, afaka adino ny momba ny fanontana printy na ny tapakilan'ny fiaran-dalamby.
rehetra ireo fampiharana ireo dia mitovy tanjona amin'ny Passbook. Na dia, mazava ho azy, ny tsirairay amin'izy ireo dia manana endrika hafa na fiasa fanampiny. Hilaza aminao bebe kokoa momba azy rehetra eto ambany izahay.
Izy io dia iray amin'ireo safidy feno indrindra ho an'ny Android amin'izao fomba izao. Na dia ny endriny aza dia tsy isalasalana fa ny lafiny ratsy indrindra amin'ity fampiharana ity. Saingy, raha apetratsika io, safidy tsara io. Izy io dia miasa toy ny Wallet tany am-boalohany, noho izany ahazoana aina ny fampiasana azy. Azontsika atao ny mitahiry ny tapakila rehetra ato amin'ity rindrambaiko ity amin'ny fomba tsotra.
Ankoatra izany, afaka mahita ny fampahalalana feno momba ny famandrihana na ny kaody QR amin'ny efijery feno isika. La maimaim-poana ny fampidinana ity rindrambaiko ity. Mahita dokam-barotra ao anaty izahay, izay mety hahasosotra be. Ny vahaolana dia ny fandoavana vola hanalana azy ireo.
PassWallet dia mitahiry ny karatrao
Developer: Fobi AI Inc.
Angamba ny valiny mivantana indrindra amin'ny Passbook for Android. Io dia ahafahantsika mitondra rakitra pkpass miaraka amin'ny fahamoranana sy fiononana lehibe. Ny iray amin'ireo fiasa izay mahatonga azy io ho safidy tsara dia ny mamela antsika mikaroha rakitra pkpass amin'ny telefaona ary ampio mivantana. Amin'ny fipihana ny tsirairay dia afaka jerena ny antsipirian'ny famandrihana sy ny kaody QR. Ho fanampin'izany, manana fidirana mivantana amin'ny kalandrie sy Google Maps izy. Noho izany, manolotra fampahalalana fanampiny sy ny mety hisian'ny fifehezana bebe kokoa amin'ny famandrihanay izahay.
Safidy tsara ho an'ny Android. Afaka ataontsika download for free amin'ny fitaovantsika. Ny zavatra tsara indrindra dia tsy misy dokambarotra na fividianana tsy ilaina ao anatiny. Tsy misy isalasalana, safidy natolotra tanteraka. Misy koa a endrika tsara Mora ampiasaina.
Dia inona koa manaitra ny momba ity fampiharana ity dia ny endriny. Mety ho iray amin'ireo mitandrina indrindra amin'ity karazana fampiharana ity. Tsy mahita motera fikarohana amin'ity tranga ity izahay, saingy mila manampy ny pass amin'ny alàlan'ny fikarohana amin'ny fitaovana. Raha vao nampidirina, amin'ny fipihana eo amin'izy ireo dia afaka mahita ny fampahalalana rehetra momba ny famandrihana nataontsika izahay. Inona koa, mikorisa miankavanana dia mahita vaovao misimisy kokoa.
La maimaim-poana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Ary koa, tsy misy fividianana na dokam-barotra ao anatiny. Ka safidy iray hafa tena mampahazo aina ny mandinika.
Pasbuk - Ento miaraka aminao ny passbook
Developer: Claucookie Labs Ltd.
Ity iray ity Ny fampiharana dia mety ilay tena itovizany amin'ny iOS Wallet. Ka raha mitady safidy miaraka amina endrika mitovy ianao dia ity no safidy hodinihina. Mamela antsika manafatra karatra mandeha ho azy ao amin'ilay fampiharana. Ankoatra izany, sokajina isan-karazany izy ireo, ka miseho miaraka ireo karatra an'ny dia iray ihany. Izay tena mahazo aina rehefa tsy maintsy mitady azy ireo. Ka tsy mandany fotoana isika. Amin'ny fipihana ny kaody QR dia ho hita eo amin'ny efijery feno amin'ny fomba tsotra.
La maimaim-poana ny fampidinana ny rindranasa ho an'ny Android. Averina indray, ao anatiny dia tsy misy doka na fividianana.
WalletPass | Wallet Passbook
Developer: Wallet Pass Alliance
ireo Rindrambaiko efatra no vahaolana tsara indrindra azo alaina ao amin'ny Passbook izay hitantsika amin'ny Android. Izy rehetra dia samy manatanteraka fiasa mitovy. Na dia miankina amin'ny endrika sy ny famaritana fanampiny aza dia mety misy iray tianao kokoa. Saingy, izy rehetra dia mihoatra ny fanatanterahana ny iraka ampanaovina azy ireo. Ka ireto app Android efatra ireto dia mandeha tsara. Iza amin'ireo no hitanao fa tsara indrindra?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny safidy tsara indrindra ho an'ny Passbook for Android
Luis Bogantes dia hoy izy:
Rehefa avy namaky ilay lahatsoratra aho dia niroso tamin'ny fametrahana PassAndorid ary tena tsara! Misaotra betsaka!
Valiny tamin'i Luis Bogantes
Niverina tany amin'ny Essential ihany i Andy Rubin